चीन पर्यावरण संरक्षण आउटडोर सजावटी सजिलो स्थापना काठ प्लास्टिक WPC Handrail निर्माता र आपूर्तिकर्ता लहुआ
पर्यावरण संरक्षण आउटडोर सजावटी सजिलो स्थापना काठ प्लास्टिक WPC Handrail
उत्पाद स्वामित्व:WPC Handrail
नेतृत्व समय:१-2-२5 दिन
२.२ मीटर, २.9मीटर, 6.6 मीटर वा अनुकूलित
पार्क, बगैंचा, पहाड पुल
चिकनी, ब्रश, सुपर एम्बोसिंग
खरानी, ​​कफी, चकलेट, देवदार, आदि
●WPC Handrail पार्क पुल र हिमाल पुलमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ
जनताको सुरक्षाको रक्षा गर्न। हामीसँग धेरै शैलीहरू छन्WPC Handrails विभिन्न ग्राहकको आवश्यकताहरू पूरा गर्न। प्राकृतिक लकड़ी अनाज बनावट र टचको साथ, यसले ग्राहकहरूको बिभिन्न आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्दछ। डब्ल्यूपीसी ह्यान्ड्रेल्ससँग सुन्दर सुरुचिपूर्ण डिजाइन र मर्मतसम्भार छ सजीलै कीरा प्रतिरोधी र उच्च कठोरता। वातावरणीय मैत्री, पूर्ण रीसाइक्लेबल र अन्य कुनै खतरनाक रसायन, वन स्रोतहरू बचत।इनस्ट र कम श्रम लागत स्थापना गर्न को लागी। कुनै पेंटिंग, कुनै गोंद, कम मर्मतसम्भार।
● हामीसँग हाम्रो आफ्नै कारखाना छ, र color र आकार तपाईंको छनौट द्वारा अनुकूलित गर्न सकिन्छ। कृपया हामीलाई छानबिन गर्न नहिचकिचाउनुहोस्।
अघिल्लो: आउटडोर वाटरप्रूफ १x०x१० मिमी काठ प्लास्टिक कम्पोजिट डब्ल्यूपीसी भित्ता कल्डिंग
अर्को: मौसम प्रतिरोध आउटडोर लकड़ी कम्पोजिट डब्ल्यूपीसी खाली सजावट
Lishen प्लास्टिक काठ रेलिंग डाउनलोड को स्थापना आरेख
Q1: तपाईंको मोल्ड सामान्य रूपमा कहिलेसम्म काम गर्दछ? दैनिक कसरी कायम गर्ने? मरेको प्रत्येक सेटको क्षमता के हो?
Q2: तपाईंको उत्पादन प्रक्रिया के हो?
Q3: तपाईंको उत्पादनहरूको सामान्य डेलिभरी समय कति हो?
Q4: तपाईंसँग न्यूनतम अर्डर मात्रा छ? यदि हो भने, न्यूनतम अर्डर मात्रा कति हो?
Q5: तपाईंको कुल क्षमता के हो?
Q6: तपाईंको कम्पनी कति ठूलो छ? वार्षिक उत्पादन मूल्य के हो?
Q7: तपाईंसँग के परीक्षण उपकरणहरू छन्?
Q8: तपाईंको गुणस्तर प्रक्रिया के हो?
Q9: तपाइँको उत्पादन उपज के हो? यो कसरी प्राप्त भयो?
Q10: WPC उत्पादनहरूको सेवा जीवनकाल कति लामो हुन्छ?
Q11: कुन भुक्तानी अवधि तपाईं स्वीकार गर्नुहुन्छ?
Q12: काठसँग तुलना गर्दा, WPC उत्पादनहरूको फाइदा के हुन्छ?
WPC Handrails for stairs आंतरिक
आउटडोर फायरप्रूफ लकड़ी कम्पोजिट WPC खाली डिस ...
आउटडोर वाटर पार्क वाटरप्रूफ कम्पोजिट डब्ल्यूपीसी डिसेम्बर ...
आउटडोर वाटरप्रूफ १x०x१० मिमी काठको प्लास्टिक कम्पोज ...
वातावरणीय मैत्री आउटडोर लकड़ी समग्र W ...
यूभी प्रतिरोध सजिलो स्थापना लकड़ी कम्पोजिट ...
WPC आउटडोर डेकिंग, WPC सजावट भुइँ, आउटडोर डब्ल्यूपीसी डेकिंग, WPC फर्श, काठ प्लास्टिक कम्पोजिट डेकिंग, डब्ल्यूपीसी कम्पोजिट डेकिंग,